उत्तम लगानी मिश्रण छनोट | Investopaper
उत्तम लगानी मिश्रण छनोट
— योगेन्द्र रेग्मी
उत्तम लगानी मिश्रणका छनोट गर्दा जोखिम र प्रतिफलको आधारमा गरिन्छ । जस्तै समान खाले वा कम जोखिममा बढी प्रतिफल दिने कम्पनीलाई उत्तम मानिन्छ । यसको लागि तलको रेखा चित्र नं. १ को आधारमा छनोट गरी निचोढ निकाल्न सकिन्छ ।
उत्तम लगानी मिश्रण छनाेट सिद्धान्तः
शेयर बजारमा थुप्रै कम्पनीको शेयर लगानीको लागि उपलब्ध भएको पाइन्छ । यी सबैमा जोखिम तथा प्रतिफल दर विद्यमान रहन्छ । जस्तै तलको चित्रमा एकातिर जोखिम जसलाई विटाले जनाउछ भने अर्कोतर्फ लाभांश दर (जसमा नगद र बोनस शेयर) दुबै समावेस गरेर निकालिन्छ । यस्तो शेयर मध्ये विवेकशिल लगानीकर्ताले सधै थोरै जोखिममा उच्च प्रतिफल आउने कम्पनीको शेयर छनोट गरी पूँजी लगानी गर्दछन् । अत प्रतिफल बढी र जोखिम सकेसम्म कम भन्ने सिद्धान्त लगानी गर्दा हेरिन्छ । यस्ता शेयरहरु नै उत्तम छनोटमा पर्दछन् भन्ने (optimum portfolio) उत्तम मिश्रणमा पर्दछन् ।
रेखा चित्र नं. १
माथिको रेखा चित्रमा क्रमश ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, र ‘छ’ रेखाले छनोट रेखालाई छोएका कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गर्दछन्, भन्ने मान्यता पनि रहेकोे छ । जसमा तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल कम जोखिम सम्भव छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । यसरी एउटा लगानी मिश्रण तयार गरिन्छ भन्ने investment portfolio management को सिद्धान्त हो । यसैलाई उत्तम लगानी मिश्रण (investment portfolio management) भनिन्छ ।
अर्को कुरा शेयर बजारमा जोखिम नै नभएको भन्ने चाहि कत्तै पाइदैन भन्ने पनि मान्यता रहेको छ । सबै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी प्रतिफल उच्च र जोखिम कम भएको शेयर छनोट गर्दछन् । त्यसैले उत्तम लगानी मिश्रण छनोट गर्दछन् । तर यो छनोट प्रक्रिया केही जटिल हुने भएकाले सबै लगानीकर्ताले निकाल्न सक्ने क्षमता नराख्न सक्दछन् । त्यसैले यो अल्लि प्राविधिक विषय पनि हो ।
उत्तम लगानी मिश्रणले जहिले पनि जोखिम कम तथा प्रतिफल धेरै दिने गर्दछ। लगानीकर्ताले लिने बजारको जोखिमलाई विटा (beta) ले नाप गर्दछ र कम्पनीको प्रतिफल सो कम्पनीको बार्षिक प्रतिवेदन वा वेला–वेलामा प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनले दिन्छ ।
तुलनात्मक रुपमा कम जोखिमका कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न चाहने भएकोले जहिले पनि पहिला प्रतिफलदर (rate of return) हेरेर, जोखिम कस्तो छ भनेर हेर्न थाल्दछन् । यसरी जोखिम हेर्दा समान जोखिममा उच्च प्रतिफल दिने कम्पनी नै सदा लगानीकर्ताद्वारा लगानीको लागि छनोट गरिन्छ । यसरी हेर्दा माथिको छनोटदर रेखाले छोएका शेयरहरुमा तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम र बढी प्रतिफल दिने भएकोले यसै रेखाले छोएका शेयरहरुमा लगानी गर्न लाग्दछन् । त्यसैले यी कम्पनीको शेयर तुलनात्मक रुपमा खरिदबिक्रि तथा मुल्य बढी हुन जान्छ ।
उत्तम लगानी मिश्रणले जहिले पनि जोखिम कम तथा प्रतिफल धेरै दिने गर्दछ। लगानीकर्ताले लिने बजारको जोखिमलाई विटा (beta) ले नाप गर्दछ र कम्पनीको प्रतिफल सो कम्पनीको बार्षिक प्रतिवेदन वा वेला–वेलामा प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनले दिन्छ जसलाई आधार मानेर लगानीकर्ताले शेयर छान्ने गर्दछन् । धेरै लगानीकर्ताले उत्तम शेयर (optimum shares) छनोट गरी लगानी गरे पछि बजारमा सो शेयरको आपूर्ति कम हुन जान्छ र मूल्य बढन जान्छ, मूल्य बढे पछि सो को प्रतिफल पनि कम हुन जान्छ । यसपछि लगानी छनोट रेखा पनि तल आउँछ र पहिला सो भन्दा तल परेका शेयरहरु उत्तम हुन थाल्दछन् । ती शेयरमा लगानीकर्ताकाे आकर्षण बढन जान्छ । पछि बजारमा सो शेयरको आपूर्ति कम हुन जान्छ मूल्य बढन जान्छ, सो को प्रतिफल पनि कम हुन जान्छ । यसरी प्रक्रिया दोहोरिन्छ, तेहोरिन्छ । यसरी उत्तम शेयर, प्रतिफल, मूल्य आदिमा फेरबदल भईरहन्छ । यसरी शेयर बजार सञ्चालन हुन जान्छ ।
शेयर बजार घटबढ हुने कारक तत्वहरूः
शेयर बजारमा नयाँ लगानी मतलब थप पूँजी (नयाँ लगानीकर्ता) भित्रीदा, कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा, कर प्रणालीमा सुधार हुँदा वा सरकारी लगानी नीति तथा आर्थिक प्रणालीमा सहजीकरण तथा रोजगारी र आयमा वृद्धि हुँदा शेयर मूल्य बढछ । यसका साथै कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुँदा, कम्पनी स्वयंको आर्थिक अवस्था तथा आम्दानीमा सुधार हुदाँ, शेयर स्वयं कम्पनीले खरीद गर्दा, शेयर रिर्भस स्पीलिट गर्दा आदि अवस्थामा पनि शेयर मूल्य बढने र यसको विपरित अवस्थामा शेयर बजार घटने अवस्था आउँछ ।
शेयर बजारबाट पूँजी पलायन हुदाँ, कम्पनीहरुको शेयर बजारमा आउदा, कर बढदा, अर्थ व्यवस्थामा सङ्कुचन, ब्याजदर वृद्धि, बेरोजगारी बढदा, दैवी प्रकोप तथा महामारी जस्तै कोरोना आदिको वेला साधारणतया शेयर मूल्यमा कमी आउँछ । यसरी शेयर बजार वास्तवमा चल्दछ । यो अति संवेदनसील विषय हो, यसमा सानो भन्दा सानो विषयले प्रत्यक्ष असर पार्दछ ।
(श्री याेगेन्द्र रेग्मी कृषि बैंकका पूर्व विभागीय प्रमुख तथा नेपालकाे आधुनिक बैकिंग प्रणाली लगायत धेरै पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ।)
← कोरोना प्रभाव : बादी समुदायको मादल बनाउने पेशा सङ्कटमा
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम बढ्यो →